2 Samuel 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel Nhoma A Ɛto So Abien 12:1-31
Natan daa Dawid mfomso adi kyerɛɛ no (1-15a)
Bat-Seba ba no wui (15b-23)
Bat-Seba woo Solomon (24, 25)
Wɔko faa Ammonfo kurow Raba (26-31)
12 Enti Yehowa somaa Natan+ kɔɔ Dawid nkyɛn+ kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mmarima baanu tenaa kurow bi mu, ɔbaako yɛ osikani, na ɔbaako yɛ ohiani. 2 Ná osikani no wɔ nguan ne anantwi bebree;+ 3 ohiani no de, na onni hwee sɛ oguan* ketewa baako a ɔtɔɔ no.+ Ɔyɛn no, na ɔne ohiani no mma mmarima boom nyinii. Aduan kakra a ohiani no wɔ no, ɔne no na edii, na ɔnom ne kuruwa ano. Ɔdaa ne kokom, na ɔyɛɛ no sɛ ne babea. 4 Akyiri yi, osikani no nyaa ɔhɔho, nanso wamfa ne nguan ne n’anantwi no bi ansom ɔkwantuni a wabɛsra no no hɔho, na mmom ɔkɔfaa ohiani no guan no kum no maa ɔbarima a ɔbaa ne nkyɛn no.”+ 5 Ɛnna Dawid bo fuw ɔbarima no denneennen, na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi,+ ɔbarima a ɔyɛɛ saa no fata owu! 6 Esiane sɛ wayɛ saa ade yi na wannya ahummɔbɔ nti, ɔde nguan anan bɛhyɛ ananmu.”+ 7 Ɛnna Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Wone ɔbarima no! Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Me na mesraa wo de wo sii Israel so hene,+ na me na migyee wo fii Saul nsam.+ 8 Mede wo wura fi maa wo,+ na mede wo wura yerenom+ nso guu wo kokom, na mede Israel ne Yuda fi maa wo.+ Ɛno da nkyɛn a, na mepɛ sɛ meyɛ nneɛma bebree nso ma wo.+ 9 Adɛn nti na woabu Yehowa asɛm animtiaa ayɛ n’ani so bɔne yi? Wode sekan akum Hitini Uria,+ na woafa ne yere aware no;+ Ammonfo sekan na wode kum no.+ 10 Esiane sɛ woabu me animtiaa na woafa Hitini Uria yere aware no nti, sekan rempa wo fi da.’+ 11 Nea Yehowa aka ni, ‘Mɛma mmusu aba wo so, na wo fi na ebefi aba.+ Mede wo yerenom bɛma wo yɔnko barima,+ na wode w’ani behu; ɔne wo yerenom bɛdeda awia ketee.+ 12 Esum mu na woyɛɛ wo de,+ na me de, mɛyɛ no awia ketee ama Israel nyinaa ahu.’” 13 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Natan sɛ: “Mayɛ Yehowa bɔne.”+ Na Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Yehowa nso de wo bɔne akyɛ wo.+ Worenwu.+ 14 Nanso esiane sɛ woayɛ eyi de abu Yehowa animtiaa nti, wo ba a wɔawo no foforo no, nea ɛbɛyɛ biara obewu.” 15 Ɛnna Natan siim kɔɔ ne fi. Na Yehowa maa abofra a Dawid ne Uria yere woo no no yaree. 16 Dawid bɔɔ nokware Nyankopɔn no mpae srɛ maa abofra no, na Dawid yɛɛ akɔnkyen,* na edu anadwo a na wakɔ dan mu akɔda fam.+ 17 Enti ne fi mpanyimfo kogyinaa ne nkyɛn sɛ wɔrema no so afi fam, nanso wampene, na ɔne wɔn annidi nso. 18 Da a ɛto so ason no, abofra no wui, nanso na Dawid nkoa no suro sɛ wɔbɛka akyerɛ no sɛ abofra no awu. Wɔkae sɛ: “Bere a abofra no te ase a yɛne no kasae no, wantie yɛn. Enti yɛbɛyɛ dɛn aka akyerɛ no sɛ, ‘Abofra no awu’? Anhwɛ a nea ɔbɛyɛ nye koraa.” 19 Bere a Dawid hui sɛ ne nkoa no reyɛ huhuhuhu no, Dawid hui sɛ abofra no awu. Enti Dawid bisaa ne nkoa no sɛ: “Abofra no awu anaa?” Na wobuae sɛ: “Wawu.” 20 Afei Dawid sɔre fii fam, na oguare de ngo srae,+ ɛnna ɔsesãã n’ataade kɔɔ Yehowa fi+ hɔ kɔsomee. Ɛno akyi no, ɔbaa ne fi,* na ɔma wɔde aduan besii n’anim, na odii. 21 Ne nkoa no bisaa no sɛ: “Dɛn na woayɛ yi? Abofra no te ase no, woyɛɛ akɔnkyen na wusui. Nanso abofra no wui ara pɛ, woasɔre adidi.” 22 Na ɔkae sɛ: “Abofra no te ase no, meyɛɛ akɔnkyen,+ na misui efisɛ mekae sɛ, ‘Hena na onim sɛ ebia Yehowa bɛdom me ama abofra no anya nkwa?’+ 23 Seesei a wawu yi, mereyɛ akɔnkyen ayɛ dɛn? Metumi de no aba nkwa mu bio anaa?+ Mewu akɔka ne ho,+ na ɔno de, ɔrensan mma me nkyɛn.”+ 24 Na Dawid kyekyee ne yere Bat-Seba+ werɛ. Afei ɔkɔɔ ne nkyɛn ne no kɔdae, na ɔwoo ɔbabarima. Ɔtoo no din Solomon,*+ na na Yehowa dɔ no.+ 25 Na ɔsomaa odiyifo Natan+ ma ɔkɔtoo no din Yedidia,* efisɛ na Yehowa dɔ no. 26 Yoab ne Ammonfo+ a wɔwɔ Raba+ no koe, na ogyee ahenkurow no.+ 27 Ɛnna Yoab somaa abɔfo baa Dawid nkyɛn bɛkae sɛ: “Me ne Raba ako,+ na magye nsu kurow no.* 28 Enti afei boaboa asraafo a wɔaka no ano betwa kurow no ho hyia na di so nkonim. Anyɛ saa na sɛ midi kurow no so nkonim a, me na menya ɛho anuonyam no.”* 29 Enti Dawid boaboaa asraafo no nyinaa ano ne Raba kɔkoe na odii so nkonim. 30 Ɛnna oyii Malkam abotiri fii ne ti; ná emu duru yɛ sika kɔkɔɔ dwetikɛse* baako, na na aboɔden abo nso hyehyɛ mu, na wɔde hyɛɛ Dawid ti. Ɔsesaw nneɛma pii+ nso fii kurow no mu.+ 31 Ɔde emu nnipa nso bae, na ɔma wɔpaee abo, na wɔde nnade a ano yɛ nnam ne abonnua yɛɛ adwuma, na wɔyɛɛ birikisi nso. Saa na ɔyɛɛ Ammonfo nkurow nyinaa. Afei Dawid ne asraafodɔm no nyinaa san baa Yerusalem.
^ Anaa “oguammere.”
^ Anaa “dii mmuada.”
^ Anaa “n’ahemfi.”
^ Efi Hebri asɛmfua bi mu; ɛkyerɛ “Asomdwoe.”
^ Ɛkyerɛ, “Yah Dɔfo.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ baabi a kurow no mufo nya nsu.
^ Nt., “me na wɔde me din bɛto kurow no so.”
^ Dwetikɛse baako yɛ kilo. 34.2. Hwɛ Nkh. B14.